तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? यी ४ काम गर्नुहोस्, मिल्नेछ लक्ष्मीको कृपा - Nawalpur Dainik
तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? यी ४ काम गर्नुहोस्, मिल्नेछ लक्ष्मीको कृपा
धन सम्पतीको जोहो गर्न र यसको बचत गर्न अनेकौं प्रयासका बावजुद सफल भइरहनु भएको छैन ? वा तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? यी अनेकौ समस्या भोगिरहनु भएको छ भने तपाईलाई लक्ष्मीको कृपा भएको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
बिभिन्न शास्त्र र मान्यता अनुसार जुन घरमा महिलाको आदर हुँदैन, उक्त घरमा लक्ष्मीको कृपा हुँदैन । देवी लक्ष्मी ति घरमा मात्र प्रवेश गर्नुहुन्छ, जहाँ महिलाको सम्मान र आदर हुन्छ।
तसर्थ घरमा भएका महिला आफन्तहरुलाई हमेशा आदर गर्नुहोस् । उनीहरु रिसाएका छन् भने तत्काल मनाउने वा प्रसन्न पार्ने प्रयाश गर्नुहोस्। अक्सर पति पत्नीबीच हुने मनमुटावका कारण पनि लक्ष्मीको कृपा हुँदैन ।
जो ब्यक्तिको कुण्डलीमा शुक्र ग्रहको स्थिति मजबूत घरमा हुन्छ उनै ब्यक्ति प्रति माता लक्ष्मीको कृपा हुने गर्दछ।ज्योतिषशास्त्रमा शुक्र ग्रहलाई सुखरसमृद्धिका रुपमा मानिन्छ।
Prevको-रोना भाइरसले फोक्सोमा असर पारेको छ कि छैन भन्ने कुरा घरमै बसेर थाहा पाउने यी तरिका ! पढ्नुहाेस् र सेयर गर्नुहाेस्
Next८० वर्षकि हजुरामा टिकटकमा यसरी छमछम नाच्नुहुन्छ; हेरौं उहाँका रमाइला टिकटक भिडियो (भिडियो सहित)